पेट भरिएको बेला पनि भोक लाग्छ ? यस्ता समस्या हुन सक्छन् – Rapti Khabar
निश्चित अवधीमा हामीलाई भोक लाग्छ । भोक लाग्नुले सामान्यतया शरीरलाई पौष्टिक आहारको आवश्यकता छ भन्ने संकेत गर्छ । भोक मेट्न खानेकुरा खाइन्छ ।
तर, खाना खाइसकेपछि पनि खानेकुराको तलतल लाग्न सक्छ । किन ?
खाना खाए लगत्तै वा केहि समयपछि पुन भोक लाग्छ भने त्यसले के संकेत गर्छ ? किन भोक लागेको महसुष हुन्छ ? यसले शारीरिक अवस्थामा केहि गडबड छ भन्ने जनाउँछ । स्वास्थ्यमा केहि न केहि समस्या छ भने नै यस किसिमको अनुभव हुन्छ ।
१. निन्द्रा नपुगेर
शरीरका लागि खाना र पानीको जति महत्व छ, उत्तिनै निन्द्राको पनि । अर्थात विश्रामको । स्वस्थ्य जीवनका लागि ७ देखि ८ घण्टा गहिरो निन्द्रा लिनुपर्छ । यस किसिमको निन्द्राले शरीरमा नयाँ स्फूर्ति पैदा गर्छ । ताजा अनुभव गरिन्छ । जबकी निन्द्रा पुगेन वा खलबलियो भने, त्यसले स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ ।
खाना खाए लगत्तै खानेकुराको तलतल लाग्नुमा पनि अनिन्द्रा एउटा कारण हो । आवश्यक भन्दा कम निदाइयो भने भोक लाग्छ ।
मुडमा परिर्वन, आलस्यता, दिउसो निद्रा नलाग्नु, तौल बढनु आदि ।
पर्याप्त निन्द्रा लिने अभ्यास गरौं । यसबाट शरीरको इनर्जी लेभल र भोक बढाउने हार्मोन्सको स्तर सन्तुलित रहनेछ ।
२. अत्यधिक तनाव
हामीले महसुष गरेका छौ, सामान्य चिन्ता वा तनाव भयो भने खानमा अरुची हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा यसको ठिक विपरित हुन्छ । जब तनाव हुन्छ, भोक लागेको महसुष हुन्छ ।
मनमा औडाह भएपछि, मन विचलित भएपछि यस्तो अनुभव हुन्छ ।
अत्याधिक तनावग्रस्त भएको अवस्थामा शरीरमा कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलिज हुन्छ, जसले गर्दा बारम्बार खाने इच्छा हुन्छ । सन् २००८ मा गरिएको एक अध्ययनको रिपोर्टअनुसार जो व्यक्तिहरु तनाव वा डिप्रेसनमा हुन्छन्, उनीहरुको शरीरमा भोक बढाउने ग्रेलिन नामक हार्मानको स्तर बढेर जान्छ । यसले गर्दा बारम्बार भोक लाग्नु स्वभाविकै हो ।
रिस, थकान, टाउको दुखाई, अनिद्रा, पेटको समस्या
तनाव हटाउनका लागि ध्यान, योग र संगीतको सहारा लिनुपर्छ
थाइराइडलाई प्रभावित गर्ने हाइपरथाइराइडिज्मका कारण व्यक्तिलाई अत्यधिक भोक लाग्छ । खासमा, जब शरीरमा थाइराइड हार्मोनको स्तर बढ्छ, यसले मेटाबोलिक रेट बढाउँछ जसबाट लगातार भोक लाग्ने जस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
पल्स रेट बढ्नु, हडबडी, अत्यधिक पसीना, कमजोरी र बारम्बार तिर्खा लाग्नु
एक्सरसाइज गर्ने, बदाम, ओखर र मरिचको सेवन गर्ने, दुधमा बेसार हालेर पिउने, बिहान खाली पेटमा लौकाको जुस पिउने
४. न्यून रक्तचाप
बारम्बार भोक लाग्नुको एउटा ठूलो कारण हुन सक्छ । आवश्यकताभन्दा बढि व्यायाम, आवश्यक कार्बोहाइड्रेट नलिनु, र लामो समयसम्म भोकै बस्नुले न्यून रक्तचापको समस्या हुन्छ । जो व्यक्तिहरु न्यून रक्तचापका रोगी छन्, उनीहरुलाई भोक बढि लाग्छ । र, उनीहरुलाई रिस पनि धेरै उठ्छ ।
थकान, टाउको दुख्ने, अत्यधिक पसीना, चक्कर लाग्नु
पौष्टिक खानेकुराका खानुका अलावा पैदल हिँड्ने, साइक्लिङ र स्वीमिङ जस्ता व्यायाम गर्नुस
टाइप र टाइप २ मधुमेहका रोगीहरुलाई पनि बारम्बार भोक लाग्छ । मधुमेहका रोगीहरुको उच्च रक्तचाप हुन्छ जसले गर्दा खाएको बेला पनि भोक लागेको महसुस हुन्छ । मधुमेहका रोगीहरुको शरीरको हरेक कोष इन्सुलिनमा निर्भर हुन्छ ।
यदि इन्सुलिन पर्याप्त मात्रामा भएन वा यसले राम्ररी काम गरेन भने सुगर ब्लडमा मिल्छ र ती कोषहरुसम्म पुग्न सक्दैन जहाँ यसको आवश्यकता हुन्छ । त्यसले गर्दा कोषले मस्तिष्कलाई सन्देश पठाउँछ कि उसलाई अत्यधिक खानुपर्ने छ र यसका कारण धेरै भोक लाग्छ ।
अत्यधिक तिर्खा, बारम्बार पिशाब आउनु, वजन कम हुनु, आँखाले धमिलो देख्नु र थकान महसुस हुनु
ब्लड सुगरको स्तरलाई सँधै नियन्त्रित राखौं
६. आन्द्रामा किरा
अत्यधिक भोक लाग्नुले कहिले काहीँ आन्द्रामा किरा परेकातर्फ संकेत गर्छ । यी किरा खासगरी टेपवर्म वा पिनवर्म हुन्छन् जुन आन्द्रामा लामो समयसम्म बस्न सक्छन् । यिनीहरुले परजीवी व्यक्तिको शरीरबाट सबै आवश्यक पोषक तत्व लिन्छन् जसले गर्दा खानापछि पनि भोकको महसुस भइरहन्छ ।
पेटको दुखाई, वजन कम हुनु, मुखबाट दुर्गन्ध, उल्टी र गुप्तांग चिलाउने
बारम्बार भोक लाग्नुका साथै तौल पनि कम हुँदै गयो भने उपचार गर्नैपर्छ
गर्भावस्थाका दौरानमा धेरै महिलाहरुलाई अत्यधिक भोक लाग्छ, जुन एकदमै सामान्य कुरा हो । जब उनी आफ्नो पेट भर्नका लागि खानेकुरा खान्छिन्, यसबाट उनको गर्भमा हुर्किरहेको शिशुका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त हुन्छ ।
तर भोक लाग्यो भन्दैमा गर्भवती महिलाले जे पनि खान हुन्न । उनीप्हरुले हरियो सागपात, ताजा फलका साथ ड्राई प|mुट्स सेवन गर्नुपर्छ ।
अपच, ग्यास, पेटमा जलन, उल्टी र पेट दुखाई
पौष्टिक चिज खाने, तर, अत्यधिक खानबाट जोगिने
८. पानीको कमी
जब व्यक्तिको शरीरमा पानीको कमी हुन्छ, त्यतिबेला उसलाई अत्यधिक भोकको महसुस हुन्छ । डिहाइड्रेसन हुँदा बढि मानिसहरु मस्तिष्कबाट प्राप्त हुने भोक र तिर्खाको संकेतबीचको अन्तर बुझ्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरुलाई भोजनको आवश्यकता परेको जस्तो लाग्छ, जबकि उनीहरुलाई आवश्यकता हुन्छ पानीको ।
कब्जियत, छालामा रुखोपन, तागतको कमी, पिशाबको कमी र आँखामा सुख्खापन
डिहाइड्रेसन हुँद्या खानाभन्दा अगाडि एक वा दुई गिलास पानी पिउने
९. रक्सी सेवन
राति खानाका साथै अल्कोहल पनि पिउने व्यक्तिहरुलाई अन्य व्यक्तिहरुको तुलनामा बढि भोक लाग्छ । रक्सी पिउँदा शरीरमा ग्रेलीन नाम हार्मोनको स्तर बढ्छ जसले भोकको महसुस भइरहन्छ ।
खराब पाचन, सुस्त दिमाग, कमजोर स्मरणशक्ति र उच्च रक्तचापको समस्या
रक्सी छोडिहाल्ने । यसबाट शरीरको वजन पनि नियन्त्रित रहन्छ र राति मिठो निद्रा पनि लाग्छ ।
सपना हरेक मानिस र जीवजन्तुले देख्ने गर्छन् | र, सम्पूर्ण प्राणीको तुलनामा मानव मस्तिष्क अतुलनीय रूपमा विकसित भइसकेकाले अन्य प्राणी र मान्छेले सपनालाई ग्रहण गर्ने तरिका भने निकै फरक हुन्छ । मानव मस्तिष्क र पशुपक्षीको मस्तिष्कबीच यो फरक छ, पशुपक्षीले सपना देखेको थाहै पाउँदैनन्, वा निद्रा खुलेपछि सपना नै पूर्ण रूपमा बिर्सिहाल्छन् । त्यसैले उनीहरूमा […]